Sajhasabal.com | Homeपिउने हैन त, जमराको जुस ?
पिउने हैन त, जमराको जुस ?
काठमाडौँ | पछिल्लो पटक जमराको जुस पिउनेहरुको वृद्धि भएको छ । उपत्यकामै पनि कतिपयले जमराको जुसलाई व्यवसायकै रुपमा पनि सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो जुस पिउँदा हुने फाइदाबारे पनि धेरैले जानकारी खोजि गर्न थालेका छन् ।
बिशेष गरि जमरा भन्ने बित्तिकै हामीले हिन्दु धर्म मान्नेहरुको महत्वपूर्ण पर्व दशैँको स्मरण गर्छौं । दशैंमा गहुँ, जौ र मकै उमारेर जमरा बनाइन्छ र उक्त जमरा दशैको टिकाको दिन आफ्ना परिवारजन र आफन्तजनको निधारमा टिका लगाई कान वा टोपीमा जमरा सिउरिएर आशिस दिने चलन छ । सहज बुझ्ने अर्थमा भन्नु पर्दा गहुँ, जौ र मकै उमारेर बनाइने कलिला पहेँला/हरिया पातलाई जमरा भनिन्छ ।
भारत र अमेरिकालगयात देशमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट हरियो जमरा (ह्विट ग्रास) को बारेमा अध्ययन भए पनि पहेलो जमराको बारेमा अनुसन्धान भएको छैन । हरियो जमराको जुस पिउनु राम्रो हुने कुरा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रमाणित भएको कुरा हो । हरियो जमराको जुसलाई हरियो रगत पनि भनिन्छ । किनकी यसले शरीरमा रगत बढाउँछ, जसले गर्दा रक्तअल्पता भएका बिरामीहरूलाई निकै फलदायी मानिन्छ । हरियो जमराको जुसमा प्रशस्त क्लोरोफिल हुने हुँदा यसमा एन्टिअक्सिडेनट गुण हुन्छ । जसले कोशहरूलाई छिटो बुढो हुन रोकेर शरीरलाई जवान राख्न सघाउँछ । यसका अलवा धेरै फाइदाहरु छन् - जो जमराबाट पाउन सकिन्छ ।
हरियो जमराको जुस पिउनाले मानिसको शरीरलाई चहिने खनिज र भिटामिन ए, बि, सी, ई समेत पाइन्छ । तयस्तै प्रोटिन र एमिनो एसिड समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । मानव शरीरमा हुने विषाक्त पदार्थहरू हटाउन, रगतमा चिनीको सन्तुलनमा राख्न र, दाँतको क्षति रोकथामको लागि पनि यो लाभदायक हुन्छ । यति मात्र होइन, पाचन सहायता गर्ने, र उच्च रक्तचापको स्तर घटाउन पनि हरिया जमराका जुस लाभदायक हुन्छ ।
जुसको नियमित सेवनबाट क्यान्सर हुनबाट समेत बच्ने, क्यान्सर भइसकेको भए क्यान्सर फैलिन रोक्छ ।
दिनको ५-१० ग्राम जमराको जुस पिउनु राम्रो हुने बताइएको छ । फाइदा गर्छ भन्दैमा एकैचोटी धेरै पिउनु राम्रो हुँदैन ।
यसको सेवनले रोग लाग्ने तत्वहरु हटाउनमा पनि मद्धत मिल्छ । मुख्यत: शरीरका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत यसले वृद्धि गर्छ । साथै मोटोपना हटाउनमा पनि यो लाभदायक छ । मुटुको लागि पनि यो निकै लाभदायक छ ।
बजारमा किनेरनै यसको सेवन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जसरी दशैंमा जमरा राखिन्छ त्यसरीनै प्राकृतिक तरिकाले जमरा उमारेर त्यसैलाई मिक्चरमा हालेर पेष्ट बनाएर पनि सेवन् गर्न सकिन्छ ।
जौ/गहुँको जमरा उर्मादा यसलाई घाम नर्छिने अध्यारो कोठाको आवश्यकता पर्दछ । जसमा राम्रो प्रांगारिक मल भएको धुलो माटो ४ इन्च जति बाक्लो हुनेगरी बर्गाकार, गोलाकार वा आयताकार भाँडामा राखी उक्त माटो माथि ठिक्क बाक्लो हुनेगरी जौ/गहुँको दानाहरु छर्नुपर्दछ र माथिबाट माटोले छोपि हल्का पानिले ओशिलो पार्नु पर्छ । यसरी जौ को जमरा राखेको ६/७ दिन जति पछि जमरालाई कैचीले काटेर सफासँग धोएर यसको जुस तयार गरी सेवन गर्न सकिन्छ ।